प्रचण्डपूत्र प्रकाश दिल्लीको सपिङ कम्प्लेक्समा जागिरे ! तनाव कम गर्न पुस्तकको सहरा • Pokhara News by Ganthan
प्रचण्डपूत्र प्रकाश दिल्लीको सपिङ कम्प्लेक्समा जागिरे ! तनाव कम गर्न पुस्तकको सहरा
प्रकाशित ११ भाद्र २०६९, सोमबार १७:२०
११ भदौ, काठमाडौं । बितेका दुई महिनामा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्दा उहाँका छोरा प्रकाशको चर्चा बढी भयो । अहिले पनि प्रकाश कहाँ के गर्दै होलान् भन्ने धेरैलाई चासो र खुल्दुली छ । कोही भन्छन् -’केटी लिएर बेपत्ता भएका प्रकाश भारतमै लुकिछिपी बसेका छन्, अब मुख देखाउन यता र्फकंदैनन् ।’ कोही भन्छन् -’हैन नेपाल आइसके, कहिले भक्तपुर र कहिले पूर्वी नेपालका ठाउँमा साथीहरुको घरमा लुकिछिपी बसिरहेका छन् ।’ आमा मार्फत कुरा मिलाएर लाजिम्पाटस्थित घरमा आउन लागेको चर्चा पनि कतिले गरिरहेका छन् । तर दुई महिनाअघि बिना मगरका साथ बेपत्ता भएका प्रकाश अहिले पनि भारतमै छन् ।
असार २० गतेदेखि आफ्नो फेसबुक पेज डिएक्टीभ गरेर बेपत्ता भएका प्रकाश हिजोआज कहिलेकाहीं फेसबुक खोल्छन् । त्योभन्दा पहिले उनी नियमित रुपमा फेसबुक चलाउँथे । फेसबुकमा लत बसेपछि सजिलै छाड्न पनि सकिँदैन । त्यसैले पछिल्ला दिनहरुमा उनी फेरि फेसबुकमा देखिन थालेका छन् । तर फेसबुक खोलेर केही लेख्ने बित्तिकै समर्थन र सहानुभूति भन्दा बिरोध र गाली गर्नेहरुको संख्या बढेपछि उनी तुरुन्तै फेसबुक डिएक्टीभ गर्छन् । फेसबुक चलाउने र डिएक्टीभ गर्ने कामलाई उनले निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
फेसबुकमा आफू कहाँ छु भनेर त उनले केही बताएका छैनन् । मात्र निराशा र गुनासाको पीडा पोख्ने गरेका छन् । आइतबार मात्र उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा परिवारसित भेट्न खोजेको, तर समाज र संस्कारले बाधा पुर्याएको उल्लेख गरेका थिए । ‘आफ्नो छोराछोरीले जे जस्तो गरेनी बाबुआमाको अघि सधैं साना नै हुन्छन्, छोराछोरीले बाबुआमालाई भेट्न नपाउने यो कस्तो दुनियाँ, कस्तो बिडम्बना ! राजनीति भन्ने बित्तिकै परिवार हुँदैन र ? माया भन्ने चिज हुन्न ? यो संस्कार कसले बनायो ?’ फेसबुकमा उनले उल्लेख गरेका थिए । तर उनको फेसबुकको यो स्टाटसमा कमेन्ट गर्नेहरुले उल्टै उनको खोइरो खनेका छन् । त्यसपछि फेसबुक डिएक्टीभ गरेर उनी फेरि पाखा लागे । सोमबार फेरि उनी फेसबुकमा झुल्किए । फेसबुक मार्फत आफ्ना साथीहरुसँग कुराकानी गरे । तर स्टाटस लेखेनन् ।
बिहान बेलुका पुस्तक, दिउँसो जागीर
प्रकाशले आफ्ना नजिकका साथीहरुसँग आफू अहिले दिल्लीमा कोठा लिएर बसेको र भर्खरै मात्र सपिङ कम्पलेक्समा काम गर्न थालेको बताएका छन् । ‘सपिङ कम्पलेक्सको काउन्टरमा काम गर्छु’ उनले साथीहरुलाई भनेका छन् । तर बिनाको ’boutमा उनले केही बताएका छैनन् ।
आफ्नो कारणले प्रचण्ड र पार्टीलाई नराम्रो भएको भन्दै उनले आत्मालोचना पनि गरेका छन् । ‘बुबालाई अप्ठेरो होला भनेर मैले फोन पनि गरेको छैन’ उनले भनेका छन् । बुबा, आमा, घरपरिवार र साथीभाइलाई आफूले धेरै ‘मिस’ गरेको उनको भनाई छ । तनाव कम गर्न पुस्तक पढ्ने गरेको प्रकाशले बताएका छन् । साथीहरुसितको कुराकानीमा उनले भनेका छन् -’दार्शनिक र विश्व प्रसिद्ध व्यक्तिहरुको ’boutमा लेखिएका पुस्तक पढ्ने गरेको छु ।’
पार्टीले अनुशासन कार्वाही गरेपनि आफू राजनीतिमै लाग्ने उनको चाहना छ । कार्वाहीको म्याद सकिने बित्तिकै फेरि पार्टीमा सकृय भएर लाग्ने प्रकाशले बताएका छन् । उनका नजिकका साथीहरुले दिएको जानकारी अनुसार प्रकाशले तत्काल नेपाल नर्फकने उल्लेख गरेका छन् । तर परिवारसित छिटै भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उनको चाहना चाहिं छ ।
अर्काकी श्रीमती लिएर असार २० देखि बेपत्ता भए लगत्तै प्रकाशलाई पार्टीले कार्वाही गरेको छ । उनी सार्वजनिक भएमा बहुविवाहको अभियोगमा पक्राउ समेत पर्न सक्छन् । घरमा भएकी श्रीमती र छोरोलाई छाडेर अर्काकी श्रीमती लिएर भागेको भन्दै उनलाई समाजले समेत घृणा गर्छ । त्यसैले प्रकाशलाई अहिले सार्वजनिक हुन डर छ । तर मान्छेको मन नै हो । उनलाई पनि आफ्नो परिवार, साथीभाइ र आफन्तको यादले त पक्कै सताउँदो हो ।
सत्ता टिकाउन प्रचण्ड मोर्चाबन्दीमा लागेको महामन्त्री गुरुङ्गको आरोप
बिमानस्थल निर्माणको सुरुवात मै माओबादीले रकम असुलेको खुलासा, पाटीले संस्थागत रुपमा लिएको स्विकार
अमेरिकन आइडलको टप २०मा दिवेश पोखरेल ११ भाद्र २०६९, सोमबार १७:२०
गण्डकी प्रदेशमा आइसोलेसनमा रहेका ७ जना घर फर्किए, २४५ जना क्वारेन्टाइनमा ११ भाद्र २०६९, सोमबार १७:२०
गण्डकी प्रदेशबाट कोरोना (कोभिड–१९) का ९३ परीक्षण, २ पोजेटिभ, ७३ नेगेटिभ ११ भाद्र २०६९, सोमबार १७:२०
अमेरिकामा दुई नेपाली मृत फेला, कोरोनाको रिर्पोट आउन बाँकी ११ भाद्र २०६९, सोमबार १७:२०
कोरोनाको बिरामी जाँच्ने तीन वटा बुथ निर्माण, पोखरामा गण्डकी अस्पतालमा राखीने ११ भाद्र २०६९, सोमबार १७:२०
कोरोना संक्रमित बढे पछि लकडाउनमा कडाइ, एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा जान नपाइने ११ भाद्र २०६९, सोमबार १७:२०
गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धि कर्मचारीलाई बिदा बस्न नपाइने (१२ बुदे निर्णय) ११ भाद्र २०६९, सोमबार १७:२०
पोखरा महानगरपालिका वडा—४ मा विपन्न ५५ परिवारलाई राहत वितरण ११ भाद्र २०६९, सोमबार १७:२०
पोखराको उत्तमचोकमा होटलका सेफ मृत फेला ११ भाद्र २०६९, सोमबार १७:२०
नेपालमा थप ३ जना कोरोना संक्रमित भेटिए ११ भाद्र २०६९, सोमबार १७:२०